देउवा र दाहालले महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ! « Bagmati Online
देउवा र दाहालले महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाउने !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिसक्दो चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका विपक्षी दलहरु भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने तयारीमा जुटेका छन् । साथै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धारा ७६ को ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्दा अब जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अघि सार्नेसम्मको गृहकार्य गरेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्न नदिने रणनीति बनाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभन्दापनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने जेठ १५ गते अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनले पार्टीकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको वार्तामा पनि यही कुरा दोहोर्याएका थिए । उनी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन गरेर मुलुकलाई आगामी मंसिरमा चुनाव गराउनेतर्फ डोर्याउन चाहन्छन् ।